Eriri Optic USB Manufacturers & Suppliers - China Fiber Optic USB Factory
Eriri optic cable, nke a na-akpọkwa fiber optical cable bụ mgbakọ ejiri iji nyefee ozi site na ọkụ ọkụ. Ejiri eriri optic fiber ma ọ bụ karịa rụọ fiber optic, mesikwuru ma chebe ya na ihe pụrụ iche iji nwee ezigbo anụ ahụ n'oge arụ ọrụ telekomunikashọn.
Ngwa anya bụ teknụzụ nke na-enye ohere ka ìhè na-agagharị na tubes dị fere fere. Igwe tubes nwere dayameta pụrụ iche, na-abụkarị 9/125 maka njikọ otu ọnọdụ. Fibers mepụtara na teknụzụ dị iche iche na-ekwe nkwa gosiri ekwe radius nke tube nke ụkpụrụ G652D, G657 A1, G657 A2. A na-eji eriri dị iche iche etinye eriri eriri, nke na-eme ka njikọ ahụ dị mfe n'oge eriri igwe na-agbapụta.
Jera nwere eriri dị iche iche nke dabere na mpaghara ngwa, dị ka:
1) eriri eriri eriri igwe
2) FTTH dobe eriri optic cable
3) Ime ụlọ nkesa eriri optic cable
Cabledị eriri dị iche iche nwere mmiri dị iche iche ma jiri ya mee ihe dị iche iche. Applicationsfọdụ ngwa na-arịọ mmiri àmà, elu n'ibu ike, UV na-eguzogide ọgwụ na anyị sikwuo ụfọdụ ihe (Steel waya, RFP, aramid yarn, jelii, ịkwanyere tube wdg) na USB ka mma ya arụmọrụ.
Jera nwere ihe ịga nke ọma iji mejupụta eriri fiber optic maka GPON, FTTx, ụlọ ọrụ netwọk FTTH. Anyị optic USB na-ruru eru na-etinyere na Central akaghị ma ọ bụ ikpeazụ mile ụzọ gasị maka ulo oru ụlọ, ụgbọ okporo ígwè na ụzọ njem, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụbọchị emmepe na ect.
E gosipụtara eriri anyị na ụlọ nyocha nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ nyocha nke atọ, nyocha ma ọ bụ ule gụnyere ntinye ntinye na nnwale ọnwụ, nnwale ike ike, ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri na-agba ịnyịnya mmiri, ule ịka nká nke UV na wdg ndị dịka ụkpụrụ nke IEC-60794, RoHS na OA.
Jera na-enye ngwa ọrụ ikuku na-ekesa ihe niile metụtara ya dịka: eriri eriri eriri, eriri eriri pacth, eriri optic splice closures, igbe nkwụsị fiber optic na wdg.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi n'ọdịnihu!
Eriri optic cable na Frp Rods, 4 Fibers
Ftth fiber optic cable na Frp Rods, 2 eriri
Dobe USB na frp mkpara, 1 eriri
Ewepụghị dobe USB na ígwè mkpara, 4 eriri
Eriri Optic Idebe USB na Steel Rods, 2 Fibers
Dobe USB na mkpara ígwè, 1 Fiber
Ftth eriri optic cable na FRP waya na FRP ro ...
Ftth Drop USB na frp Waya na FRP mkpanaka, 1 F ...
Ftth Drop USB Steel Waya na mkpara mesikwuru, ...
Ftth eriri optic cable, ígwè waya na mkpara rei ...
Ftth eriri optic cable Steel waya na mkpara Rein ...
Ftth USB Steel Waya na frp mkpara mesikwuru, ...